Nkọwa:Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi Autozone,Enweghi Okwute Uhie Na-adịghị Egwu,Enweghi Okwute Uhie Na-adịghị Egwu
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Enweghị mgbu ọnya gị nkedo ụgbọelu na-ekpuchi akpaaka
Ihe Nlereanya.: SWC2504
Ụdị mkpuchi ígwè a nwere ike iji chaa chaa. Anyị bụkwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ntanaka ụgbọelu maka afọ asatọ. Ọ na-adịgide adịgide ma na-enwe mmasị na gburugburu ebe obibi, na-ekpuchi ihe mkpuchi na-adịghị egbu egbu nwere ike ịka mma maka iji ya, n'ihi na ọ bụ 100% nri silica. Na mkpuchi ikuku ígwè nke na-esochi ya bụ na ị na-anya ụgbọ ala, mgbe ị na-anya ụgbọ ala ahụ, ọ dị mma, na-emetụkwa ya aka. ihe nkedo uhie uhie na-aghọwanye ndị na-ewu ewu, ọ bụghị nanị ọnụ ala dị ala, kamakwa ya na oke elu.
Igwe mkpuchi uhie ụkwụ na-acha ezigbo mma, nke dị n'ime ya dị mma, ya mere ọ ga-aka mma maka ichebe ụgbọelu ụgbọ ala.
Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi Autozone Enweghi Okwute Uhie Na-adịghị Egwu Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi Walmart Ụgbọala na-agba ụkwụ na-ekpuchi ụgbọala Ụgbọala ụgbọala na-ekpuchi Online Ụgbọala ụgbọala na-echekwa mkpuchi